Zim faces bleak future: IMF 21 January 2019 HARARE - Zimbabwe will struggle to get financial support from international financial institutions due to its high debt levels, the International Monetary Fund (IMF) has said. Gerry Rice, the IMF spokesperson, said the southern African country need policies that would stabilise the economy. ...
Zim commits to debt clearance programme 14 February 2018 HARARE - President Emmerson Mnangagwa's government says it is committed to repay its debts with the international community. Central bank governor John Mangudya said in line with the new economic order, government is intensifying the re-engagement process with the international community to im...
Politics, economics: Bane of Zim's socio-economic prospects (Part 1) 3 September 2017 HARARE - A recent report on Zimbabwe authored by the International Monetary Fund (IMF) creates the impression that efforts of the economic team driving the country's revival agenda are being undermined by political circumstances. It notes that this economic team was forced to pay the 13th cheq...
IMF warns Zim govt 9 December 2016 HARARE - The International Monetary Fund (IMF) has warned President Robert Mugabe's government against interfering with Treasury operations. IMF local representative, Christian Beddies, yesterday told the businessdaily that government was not giving Finance minister Patrick Chinamasa enough ro...
UK rules out financing Zim 2 November 2016 HARARE - The United Kingdom (UK) has ruled out any involvement in a fresh bailout for Zimbabwe after suggestions that a mechanism backed by a high-ranking advisor to the British government could provide bridge financing for Harare. UK's Harare Embassy spokesperson, John Culley, yesterday quash...
No reforms, no money: IMF 31 October 2016 HARARE - The International Monetary Fund (IMF) has insisted that President Robert Mugabe's government will not receive any fresh capital until it repays all its debts and implement key economic reforms. This was after the cash-strapped country last week cleared its 15-year-old $107,9 million a...
Strange case of Zim's IMF's repayment 30 October 2016 EDITOR — On October 28, 2016, Zimbabwe utilised part of its Special Drawing Rights (SDRs) to settle the $108 million it owed to the International Monetary Fund (IMF)'s Poverty Reduction and Growth Trust Fund (PRGT), which funds were held and kept at the IMF. The timing of this payment and the ...
No IMF bail out for Zim 22 October 2016 HARARE - The International Monetary Fund (IMF) has said it will not bail out Zimbabwe, unless the country comes up with a “credible plan” to pay its dues to other global financiers. Zimbabwe — currently struggling to service its $1,8 billion-plus debt owed to various international financiers —...
IMF confirms our worst fears 7 October 2016 HARARE - The International Monetary Fund (IMF) this week confirmed what we have been saying all along — Zimbabwe is now officially in recession due to President Robert Mugabe's disastrous policies and mismanagement. In its latest World Economic Outlook report, the IMF slashed Zimbabwe's 2016 g...
Chinamasa's disastrous IMF gamble 12 July 2016 HARARE - Finance minister Patrick Chinamasa's hasty decision to pay $1,8 billion debt to the International Monetary Fund (IMF) is probably the single most momentous event since the death of the Zimdollar. In an era that has seen calamitous economic events such as record breaking hyperinflation...